aluminium xabagta boron aluminium oksaydh boron
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2Al + B2O3 → Al2O3 + 2B
Waa maxay xaalada falcelinta Al (aluminium) kaga falcelisa B2O3 (boron oxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Al2O3 (aluminium oxide) iyo B (boron)?
Dhacdada Al (aluminium) ka dib waxay la falgashaa B2O3 (boron oxide)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga B (boron), oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda B2O3 (boron oxide), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2Al + B2O3 → Al2O3 + 2B
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta B2O3 (boron oxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee B2O3 (boron oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh B2O3 (boron oxide) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Al2O3 (boron oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al2O3 (aluminium oxide) alaab ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta B (boron)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee B (boron oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh B (boron) badeecad ahaan?
6O2 + Al4C3 → 2Al2O3 + 3CO2
Oxygen aluminium oksaydh carbon dioxide
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 6O2 + Al4C3 → 2Al2O3 + 3CO2
Waa maxay xaalada falcelinta O2 (oxygen) ay kaga falceliso Al4C3 ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Al2O3 (aluminium oxide) iyo CO2 (kaarbon dioxide)?
Dhacdada O2 ka dib (oxygen) waxay la falgashaa Al4C3 ()
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Al4C3, la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 6O2 + Al4C3 → 2Al2O3 + 3CO2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Al4C3 ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Al4C3 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al4C3 () falcelin ahaan?
aluminium perchlorate potassium aluminium oksaydh chloride potassium
8 3 4 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 8Al + 3KClO4 → 4Al2O3 + 3KCl
Waa maxay xaalada falcelinta Al (aluminium) kaga falcelisa KClO4 (potassium perchlorate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Al2O3 (aluminium oxide) iyo KCl (potassium chloride)?
Dhacdada Al (aluminium) ka dib waxay la falgashaa KClO4 (potassium perchlorate)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda KClO4 (potassium perchlorate), oo baaba'aya
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 8Al + 3KClO4 → 4Al2O3 + 3KCl
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta KClO4 (potassium perchlorate)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee KClO4 (potassium perchlorate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KClO4 (potassium perchlorate) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jidheed ee Al2O3 (potassium perchlorate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al2O3 (aluminium oxide) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee KCl (potassium perchlorate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KCl (potassium chloride) badeecad ahaan?
aluminium chloride chloride aluminium oksaydh chloride aluminium
6 3 1 1 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 6Al + 3SOCl2 → Al2O3 + Al2S3 + 2AlCl3
Waa maxay xaalada falcelinta Al (aluminium) kaga falcelisa SOCl2 (thionyl chloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Al2O3 (aluminium oxide) iyo Al2S3 () iyo AlCl3 (aluminium chloride)?
Dhacdada Al (aluminium) ka dib waxay la falgashaa SOCl2 (thionyl chloride)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga AlCl3 (aluminium koloriin), oo soo muuqanaya dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda SOCl2 (thionyl chloride), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 6Al + 3SOCl2 → Al2O3 + Al2S3 + 2AlCl3
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta SOCl2 (thionyl chloride)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee SOCl2 (thionyl chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh SOCl2 (thionyl chloride) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Al2O3 (thionyl chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al2O3 (aluminium oxide) alaab ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Al2S3 ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Al2S3 (thionyl chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al2S3 () badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee AlCl3 (thionyl chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh AlCl3 (aluminium chloride) alaab ahaan?
aluminium kaarboonka xabagta boron aluminium oksaydh carbide boron
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 4Al + C + 2B2O3 → 2Al2O3 + B4C
Waa maxay xaaladda falcelinta Al (aluminium) ee C
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Al2O3 (aluminium oxide) iyo B4C (boron carbide)?
Dhacdada ka dib Al (aluminium) waxay la falgashaa C (kaarboon) waxay la falgashaa B2O3 (boron oxide)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga B4C (boron carbide), oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 4Al + C + 2B2O3 → 2Al2O3 + B4C
Su'aalaha la xidhiidha alaabta B4C (boron carbide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee B4C (boron oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh B4C (boron carbide) alaab ahaan?